ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းရှိရောင်းရန်မြေကွက် ၊ ခြံကွက်များ | iMyanmarHouse.com
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်မြေကွက် ၊ ခြံကွက်များ
တောင်ဒဂုံမြို့နယ် မောင်းမကန်လမ်းမကြီးပေါ်က ခြံနှစ်ခြံတွဲလေးကို တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10176437 အတွက် 925 Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
9,800 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10175730 အတွက် အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
095043558, 09774665277, 09420094681, 09444337702
10,500 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10175504 အတွက် အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
095043558, 09774665277, 09444337702, 09420094681
🏠 တောင်ဒဂုံ(မြယမုံအိမ်ရာ) မြေကွက်အရောင်း🏠
7,000 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10173150 အတွက် အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
0.80 သိန်း (ကျပ်) (တစ်စတုရန်းပေ ဈေးနှုန်း)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10172249 အတွက် အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🏠 ​တောင်ဒဂုံ (မြယမုံအိမ်ရာ) မြေကွက်အရောင်း🏠
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10171992 အတွက် အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
တောင်ဒဂုံထဲမှာ အရောင်းရှာနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေတို့အတွက် အိမ်အရောင်းလေးတစ်လုံးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာ 🥰...
575 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10171522 အတွက် ကြည်မြန်မာစံ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဒဂုံတောင် ၁၉ ရပ်ကွက် မြေကွက်အရောင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10165586 အတွက် Baydar Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Baydar Real Estate ပိတ်ရန်
Sony မြ​ယမုံ အိမ်ရာတွင် မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်
4,350 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10163066 အတွက် New Life Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
New Life Real Estate ပိတ်ရန်
Mya Yamon Waterfront Villa ရှိ မြေကွက်ကျယ် စျေးတန်အရောင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10157590 အတွက် Myanmar Apex သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09775063633, 09951538034, 09757528838
Myanmar Apex ပိတ်ရန်